Avianca Brasil Inotangisa Yayo Yekutanga Yevatakuri Mugwagwa muMiami
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Avianca Brasil Inotangisa Yayo Yekutanga Yevatakuri Mugwagwa muMiami
Airlines • Brazil Kupwanya Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Kuputsa US News • Bhizinesi Kufamba • Colombia Breaking News • nhau • Dhinda Zviziviso • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Avianca Brasil, imwe yendege huru dzese uye dzinokurumidza kukurumidza muBrazil, inozivisa kutanga kwendege dzendege dzisingamisi dzese pakati peSão Paulo (GRU) neMiami (MIA), kutanga Chishanu, Chikumi 23, 2017. kutanga kuunzwa kwenzira yevanofamba kuenda kunzvimbo yeUS uye yechipiri chete kunze kweSouth America. Avianca Brasil yakashanda sevhisi yekufambisa kuMiami International Airport kubvira 2015.
Ndege dzinozoshandirwa neAirbus A330-200 ndege, inogara 238 vafambi uye yakagadzirirwa mumakirasi maviri ebasa: 32 zvigaro muBhizinesi uye 206 muEconomy.
"KuAvianca Brasil, tiri kusangana neshanduko inonakidza uye nhambo nyowani yekukura kuita mutakuri akasimba, akura uye anokwikwidza," akadaro Frederico Pedreira, Mutungamiri kuAvianca Brasil, inova nhengo yeiyo mbiri Star Alliance. "Nekuda kwekuwanda kwevanhu veBrazil vanoshanya nekugara muSouth Florida, takafunga kutanga chirongwa chenguva refu panguva ino nekuti tinonzwisisa kuti kune mikana yakanaka yebhizinesi nemukana wekupa masevhisi epamusoro kune vafambi vekunze."
Avianca Brasil ine zvikepe zvidiki muLatin America uye inozivikanwa nekupa basa repamusoro, gumbo rakaringana, masisitimu evaraidzo, chikafu chemahara uye chirongwa chekuvimbika cheAmigo.
Bhizinesi rekirasi vatengi vanopihwa ruzivo rwakawedzerwa kusanganisira mamenyu eprimiyamu uye zvigadzirwa zveanobatsira. Iyo 1-2-1 zvigaro zvigadziriso zvinoita kuti hukuru hwakavanzika uye kugarika; zvigaro zvakatsenhama panzvimbo yakati sandara zvizere. Pavanogona, vafambi veprimiyamu vanonakidzwa neyemberi pane-yekuda varaidzo sisitimu, ine akasiyana siyana mafirimu, TV nhepfenyuro nemitambo, inoonekwa pane gumi nemashanu-inch touchscreens. Zvigaro zvakare zvine mapaneru ekudzora, mwenje webetsero, matafura ekutsigira, USB kubatanidza, zvitoro zvemagetsi uye zvigadzikiso zvemusoro zvinogara.
MuEconomy, iyo yakagadzirirwa mune 2-4-2 kurongeka, vafambi vanogona kutora mukana wega wega varaidzo masisitimu akashongedzerwa ne9-inch touchscreen monitors, pamwe neremote control, nzvimbo dzemagetsi, madoko eUSB, uye inogadziriswa musoro nemakumbo zororo. Jets nyowani zvakare inoratidzira ichangoburwa LED ambient mwenje tekinoroji, yakagadzirirwa kupa yakasununguka yekufamba ruzivo.
Ndege yekutanga yakasungwa neMiami, Ndege 8510, inosiya Sao Paulo (GRU) Chishanu, Chikumi 23, 2017 na11: 55 pm, ichidzika kuMIA na7: 25 am Mugovera, Chikumi 24, 2017. Ndege 8511 inoenda MIA na6: 55 pm June 24, tichisvika muBrazil na4: 30 am Svondo, Chikumi 25 (nguva dzemuno). Gare gare zhizha rino, kambani iri kuronga kuvhura São Paulo - Santiago mutyairi wevatyairi ne ndege itsva dzeA330.
MIA parizvino inoshandira avhareji makumi manomwe neshanu evhiki isingamise vafambi ndege kuenda kumaguta masere muBrazil, inova ndiyo nhandare chero yeUS. Avianca Brasil ichava ndege yechitatu yendege inoshandira Brazil, musika wepamusoro wepasi rose weMIA muna71 nevanopfuura mamirioni e2015.
"Isu tinokudzwa kuti Avianca Brasil yakasarudza kuwedzera mashandiro ayo paMIA, uye zvakare iite Miami nzira yayo yekutanga yekutakura kunze kweSouth America," akadaro Miami-Dade Aviation Director Emilio T. Gonzalez. "Tichiri kuramba tichitsvaga nzira munzvimbo dzisina kuwanikwa pasirese, tiri kushandawo kusimbisa masevhisi emhepo munzvimbo dzedu dzakasimba dzeLatin America neCaribbean."
Matikiti kuenda kuAvianca Brasil nendege yakananga kubva kuMiami kuenda kuSão Paulo anowanikwa pawww.avianca.com.br, kuburikidza nemasangano ekufambisa kana vamiririri vevatengesi vekambani (GSAs) muUnited States:
Nezve Avianca Brasil
Avianca Brasil yanga iri nhandare yendege yakatarwa kubvira 2002. Parizvino, mutakuri anoshandira makumi maviri nematatu epamba uye maviri epasi rese achienda ne23 mazuva ese, achishandisa 235 Airbus aircrafts - ngarava diki muLatin America. Avianca Brasil ndiye anotakura wekutanga muSouth America kugonesa kupinda kweinternet mundege uye mumwe wemapiyona muLatin America mashandiro eA49neo yanhasi. Pakati pezvakanaka izvi pane chirongwa chekuvimbika cheAmigo, icho chine mamirioni mana vatengi vakanyoreswa. Seyenhengo yeBrazil kuStar Alliance, nhare huru yepasi rose yendege, Avianca Brasil inobatanidza vatakuri kunhandare dzinopfuura 320 4 pasi rese kuburikidza nehama dzayo makumi maviri nenomwe dzenyika. Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota tsvaga: www.avianca.com.br, tevera @AviancaBrasil pa Twitter uye ubatanidze Avianca Brasil paFacebook.
Pamibvunzo yezvenhau, ndapota nyorera:
Nhare.: 305-725-2875 / 305-632-8272
Email: [email inodzivirirwa] / [email inodzivirirwa]
Nhare .: +55 (11) 3475-8012